Maalintii ay Soomaaliya Mareykaka bartay sida Africa loo xushmeeyo - Caasimada Online
Home Warar Maalintii ay Soomaaliya Mareykaka bartay sida Africa loo xushmeeyo
Maalintii ay Soomaaliya Mareykaka bartay sida Africa loo xushmeeyo
Sanadkii 1991 waxa ay kooxo hubeysan Somalia ku afgambiyeen Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Waxaa qarxay dagaallo sokeeyo oo horseeday gaajo ba’an; ugu yaraan waxaa la dilay saddex boqol oo kun.
1992, golaha amniga ee Qaramada Midoobay waxa ay sameeyeen hawgal oo ujeedkiisu ahaa sidii cunto loogu geyn lahaa dadka Jamhuuridda Somalia. Hase ahaatee, maalintii ugu horreeysay kolonyadii garaarka waxa ay bilaabeen in ay la kulmaan caqabado uga imanaayey dagaalyanahada hubeysan ee maxaliga ah.
Cuntada kaliya waxaa lagu gudin karay in lacag la siiyo maleeshiyada. Taas waxaa dheeraa, cuntada xataa ma gaari jirin dadka baahan. QM waxa ay go’aansatay in ay sameyso ciidamo nabad ilaalin ah oo ay ka mid ahaayeen 20 dal, Mareykanka wuu ku jiray.
Hase ahaatee, farogalinta arrimaha gudaha ee Soomaaliya ee caalamiga ah waxa ay mushtamaca kala kulmeen dagaal uu hoggaaminayey madaxii isbahaysiga qaranka Somalia (Somali National Alliance) ama SNA, Jeneral Maxamed Faarax Caydiid, kaas oo dagaal ku iclaamiyey nabad ilaaliyaashii.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada QM iyo kooxaha hubeysan waxa uu bilowday markii la qabsaday Raadiyihii SNA-da taas oo ay ciidamada nabad ilaalinta UN-ka ku sheegeen in ay kicin waday. 5-tii bishii Juun ciidamada nabad ilaalinta waxaa soo gaaray khasaarihii ugu horreeyey.
Markii ugu horreeysay waxaa weerar qorsheysan lagu dilay 24 askari oo Pakistani ah, isla maalintaas kaddib waxaa weerar lagu qaaday dhawr kooxood oo nabad ilaaliyeyaal ah. Iyaga oo ka jawaabaya, ciidamada cirka ee Mareykanka waxa ay duqeymo u geysteen xarumaha kooxaha hubeysan iyaga oo burburiyey xaruntii Isbahaysiga qaranka Soomaaliya, raadiyihii iyo gurigii Caydiid.
Hase ahaatee, ficilkii ceynkaas ahaa kaliya wax uu si xumeeyey xiriirkii dadweynaha iyada oo ay dhalisay in bulshada go’aan dagaal ka gaaraan Mareykanka. Hase ahaatee, hoggaankii QM waxa ay go’aan ku gaareen in la soo qabto iyada oo madixiisa la dul dhigay 25 kun oo dollar-ka Mareykanka ah.
Soo qabashada Caydiid waxaa hawlgalkiisa loo xilsaaray ciidamada gaar ah ee Mareykanka iyada oo kooxda xeeladda gaarka ah lagu soo daabulay Soomaaliya (Tactical Ranger Forces). Kaddib markii ay sameeyeen dhawr hawgal oo muran dhaliyey, laguna khasaaray, Mareykanka waxa ay si KMG ah uga wareegeen Caydiid iyaga oo beegsaday saaxiibadiis.
Hadafka Mareykan-ka waxa uu ahaa soo qabashada Cumar Salaad oo ahaa la taliyaha Caydiid, October 3-deedii 1993, kaddib saddex maalin oo ay dheceen dibadbaxyo looga soo horjeeday Mareykanka waxa uu qorshaha ahaa in la joogo dabaq saddex fookh/biyaano ah oo xataa sida la sheegay Caydiid ku jiray.
Mareykanka oo halkaas ugu magacdaray xaafadda Badda Madow, waxaa daganaa inta badan taageereyaasha Caydiid kuwaas oo haystay hub wanaagsan. Sida laga soo xiganayo dhawr khiyaas oo la sameeyey dagaalyahanada waxa ay tiradooda u dhexeeysay 2 kun ilaa iyo lix kun. Mareykanku waxa uu qorsheeyey in 160 ciidamada gaarka ah ay ku hawlgalaan laakiin wanaag uma ballan qaadin isku daygaas.
Hawlgalka waxa uu bilowday 3pm (Galabkii). Ciidamada Mareykanka oo adeegsanaya Helicopter ayaa bilaabay in ay ku soo dagaan dhismaha waxa ayna bilaabeen in ay hub ku rideen daaraddiisa. Hase ahaatee, wax daqiiqad ka yar waxaa jug culus ayaa uga timi dhisme kaas ku dhawaa ciidamadii gaarka ahaa. Jawaabtii kooxaha hubeysan waxa ay la yaab aan wanaagsaneyn ku noqotay Mareykanka.
Hase ahaatee, ciidamadii gaarka ahaa waxaa u suurtagashay in ay qabtaan Cumar Salaad iyo 23 ka mid ah Isbahaysiga Qaranka Soomalya laakiin Maxamed Faarax Caydiid guriga ma joogin. Horjoogeyaashii kooxihii dableyda ahaa iyo ciidamadii waday waxa ay galeen gaarigii Hammer-ka kaas oo yimi goobtoo hawlgalka, laakiin wadaddii xornimada ayaa ku noqotay mid dheer.
Saacado gudohood, jidadkii Muqdisho waxaa la wada dhigay jidgooyooyin, iyaga oo wajahayey caqabaddi labaad, kolanyadii Mareykanka waxaa lala beegsaday duqeymo culus.
Intii ay ciidamada Mareykanka wadeen iska caabinta waxaa la soo riday diyarad Helicopter ah oo siday 6 askari. Ciidmadii gaarka ahaa waxaa loo diray in ay badbaadiyaan diyaaradda soo dhacday waxa ay dagaal qaraar kala kulmeen kooxihii hubeysnaa.
Iska horimaan fool ka fool ah ayaa qarxay waxaana la sheegay dhawr saac godhood in la’iskuriday lixdan kun oo rasaas ah.
Saacad walba waxaa xumaanayey xaaladda sideetanka ciidamada Mareykanka ee hareereysnaa. Rasaasta ka yaraaneysay, biyaha iyo daawada. Waxa ay saqdii dhexe ku baxsadeen kaddib markii ay u yimaadeen ciidamo gurmad ah oo ka socday nabad ilaaliyeyaashii.
Dhammaan dagaaladdii ka dhacay jidadka Muqdsho, ciidamada gaar ah waxa ay ku dileen 18 halka 84 kale dhaawac soo gaaray. Intaas waxaa dheer kooxaha hubeysan waxa ay bur buriyeen diyaaraddii Black Hawk, saddex gaariwada qafilan ah iyo hal kuwa xamuulka ah.
Dabaaldagga carruurta Soomaaalida kaddib markii la soo riday diyaaraddii Black Hawk
Marka la qiimeeyo in ciidamada ugu wanaagsanaa ee gaarka ahaa ka qeybgaleen hawlgalka, natiijadii ka dhalatay waxa ay ahayd ‘MASIIBO’. Guuldaraddii Soomaaliya waxa si xanuun badan u liqay wasiirkii difaaca ee Mareykanka Les Aspin kaas oo durbadiiba is casilay.
Wixii ka dhacay Muqdisho waxa ay dhaliyeen jawaab bulsho oo Mareykanka ah taas oo uusan ka jawaabi kareyn madaxweyne Bill Clinton. Amarkiisa, waxaa lagu joojiyey dhammaan hawlgaladdii uu Mareykanka ka waday Soomaaliya, bishii Maarso 31-keedii, waxaa loo qorsheeyey bixitaankii ciidamadii ugu dambeeyey ee Mareykanka. Waxaa la soo gabagabeeyey heshiis lala galay hoggaamiyihii kooxaha hubeysnaa ee Soomaaliya, Caydiid.
W/Q: Joel Savage
W/T: Caasimada Online